» प्रदेशको राजधानी हेटौंडाबारे द्विविधामा नेकपा सांसद : पार्टी निर्देशन मान्ने कि जनभावनाको कदर ?
प्रदेशको राजधानी हेटौंडाबारे द्विविधामा नेकपा सांसद : पार्टी निर्देशन मान्ने कि जनभावनाको कदर ?
२१ पुष २०७६, सोमबार १८:३३
प्रदेश ३ को स्थायी राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने विवाद प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ‘नेकपा’भित्र निकै पेचिलो बन्दै गएको छ ।
नेकपाको सचिवालय बैठकले प्रदेशको नाम बाग्मती र राजधानी हेटौंडा राख्ने निर्णय गरेपछि नेकपाकै अधिकांश सांसद असन्तुष्ट बनेका छन् ।
हेटौंडामा लगातार ३ दिनसम्म बसेको नेकपाको प्रदेश संसदीय दलको बैठकमा बोल्ने प्रायः सांसदले प्रदेशको स्थायी राजधानी हेटौंडामा राख्न उपयुक्त नहुने धारणा राखे ।
मकवानपुर र चितवनबाहेक ११ जिल्लाका सांसदलाई स्थायी राजधानी हेटौंडा कायम गर्ने कुरा चित्त बुझेको छैन, तर यीमध्ये केही पार्टीको निर्णय उल्लंघन गर्नु नहुने पक्षमा छन् ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले हेटौंडालाई प्रदेश ३ को अस्थायी राजधानी तोकेको थियो ।
हेटौंडालाई प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्नमा तत्कालीन उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री कमल थापा ९जो राप्रपा अध्यक्ष पनि हुन्०को भूमिका विशेष रह्यो ।
त्यतिबेला देउवा र कमल थापाले गरेको निर्णय अहिले आएर नेकपालाई भारी बनेको छ ।
हेटौंडाबाट राजधानी सार्दा हुनसक्ने आन्दोलन र अस्थिरताबाट बच्न नेकपाले यथास्थितिमै रहन दिने निर्णय गरेको स्रोत बताउँछ ।
काठमाडौंबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपा सांसद दीपक निरौला पार्टी निर्णय कार्यान्वयन हुने बताउँछन् । ‘सचिवालयले निर्णय गरेको हो, निर्देशन होइन,’ सांसद निरौलाले लोकान्तरसँग भने, ‘निर्वाचन प्रक्रियामा जाने बेलामा संसदीय दललले सांसदहरूलाई त्यसअनुसारको निर्देशन दिन्छ । दलीय व्यवस्थामा पार्टीको निर्देशन नमान्ने भन्ने हुँदैन ।’
निरौलाले यसो भनिरहँदा नेकपाकै अर्का सांसद रत्नप्रसाद ढकाल भने आफूहरूले काभ्रेलाई स्थायी राजधानी बनाउने प्रस्ताव संसद्मा राखेर त्यसैको पक्षमा मतदान गर्ने बताउँछन् । तर, पार्टीले निर्णयमा पुनर्विचार गर्ने उनको आशा छ ।
‘तीन दिनसम्म चलेको संसदीय दलको बैठकमा अधिकांश सांसदले हेटौंडा स्थायी राजधानी बनाउन नहुने धारणा राख्नुभएको छ,’ सांसद ढकालले भने, ‘बहुमत सांसदले यस्तो धारणा राखिसकेपछि पार्टी हाम्रो अभिमतविपरीत जान्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन । संसदीय व्यवस्थामा अल्पमतले बहुमतलाई शासन गर्ने भन्ने हुँदैन ।’
पार्टीले निर्णयमा पुनर्विचार नगरे आफूहरूले काभ्रेको पक्षमा मतदान गर्ने उनले बताए । ‘अझै पनि हामीलाई पार्टी हाम्रो भावनाविपरीत जान्छ भन्ने लाग्दैन,’ सांसद ढकालले थपे, ‘यदि गएछ भने हामीले काभ्रेलाई स्थायी राजधानी बनाउने प्रस्ताव प्रदेश सभामा दर्ता गर्छौं र त्यसैको पक्षमा मतदान गर्छौं ।’
प्रदेश कमिटी र संसदीय दलले यसविषयमा कुराकानी गरिरहेको र त्यसैका लागि आज संसदीय दलको बैठक नराखिएको उनले बताए । नेकपा संसदीय दलको अर्को बैठक भोलि बस्नेछ ।
अर्थ तथा विकास समिति सभापति समेत रहेका नेकपा सांसद सरेश नेपाल यो दीर्घकालीन महत्वको विषय भएकाले घनीभूत छलफल गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
बढीभन्दा बढी छलफल गरेर जनभावनाअनुसार निर्णय लिनुपर्ने कुरामा पार्टी सचिवालयको निर्देशन आउँदा अधिकांश सांसद द्विविधामा परेको उनले बताए ।
‘सचिवालयको निर्णय तथा निर्देशन पालना गरौं जनभावनाविपरीत, पालना नगरौं पार्टी निर्णयविपरीत अधिकांश सांसद द्विविधामा पर्नुभएको छ,’ सांसद नेपालले लोकान्तरसँग भने ।
आफूहरू जनभावनाविपरीत जान नसक्ने बताएका उनले यसलाई रातारात पारित गर्नेभन्दा पनि लामो छलफल गरेर प्रक्रियाअनुसार नै निर्णयमा पुग्न उचित हुने बताए ।
जनभावना काभ्रे वा भक्तपुरमध्ये एक ठाउँमा राजधानी राख्दा हुन्छ कि भन्ने रहेको उनको भनाइ छ ।
अध्यक्ष र महासचिव हेटौंडा जाने तयारीमा !
पार्टी सचिवालयको निर्णयमा आफ्नै सांसदहरू असन्तुष्ट बनेपछि नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र महासचिव विष्णु पौडेल हेटौंडा जाने भएका छन् ।
‘अध्यक्ष र महासचिव आउँदैहुनुहुन्छ भन्ने जानकारी मैले पनि पाएको छु, आज कार्यव्यस्तताका कारण आउन सम्भव भएन, अब भोलिसम्ममा आउनुहुन्छ,’ नेकपा सांसद दीपक निरौलाले भने ।
पार्टी निर्णय आफ्नै सांसदहरूले उल्लंघन गर्दा नैतिक प्रश्न उठ्न सक्ने भएकाले असन्तुष्ट सांसदहरूलाई थामथुम पार्न अध्यक्ष र महासचिव हेटौंडा जान लागेको नेकपा उच्च स्रोतको दाबी छ ।
महासविच पौडेल भने अस्थायी राजधानी हेटौंडालाई नै स्थायी राजधानी बनाउँदा बुटवललाई पनि स्थायी राजधानी कायम गर्न सहज हुने ठानेर सक्रिय बनेका छन् । प्रदेश ५ मा पनि राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने विषय जटिल बनिरहेको छ ।
प्रदेश ३ प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन आजबाट शुरू हुँदैछ । यही अधिवेशनबाट प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाउने तयारी छ । स्रोत : लोकान्तर